JIDE N'AKA NA FAỊLỤ AHỤ DỊ NA NTFS OLU NA WINDOWS 10 - ESI EDOZI - WINDOWS - 2019
Jide n'aka na faịlụ ahụ dị na NTFS olu na Windows 10 - esi edozi
Otu n'ime nsogbu ndị onye ọrụ Windows 10 nwere ike ịhụ mgbe ị na-ebugo ihe oyiyi faịlụ ISO site na iji ngwaọrụ Windows 10 bụ ozi na-ekwupụta na enweghị ike ijikọ faịlụ ahụ, "Jide n'aka na faịlụ ahụ dị na NTFS ụda, na nchekwa ma ọ bụ olu ekwesịghị ịbịakọta ".
Akwụkwọ ntuziaka a na-akọwa n'ụzọ zuru ezu otu esi edozie "Njikwa faịlụ agaghị ejikọta" mgbe ị na-etinye ihe ISO n'iji ngwaọrụ ndị e ji arụ ọrụ OS.
Wepụ ihe na-adịghị mma maka faịlụ ahụ ISO
Ọtụtụ mgbe, a na-edozi nsogbu ahụ site n'iwepu mkpụrụ "Sparse" site na faịlụ ISO, nke nwere ike ịbụ maka faịlụ ebudatara, dịka ọmụmaatụ, site na iyi.
Ọ dị mfe ịme nke a, usoro ga-abụ dị ka ndị a.
Gbaa ọsọ ọsọ (ọ bụghị n'aka onye nchịkwa, mana ka ọ bụrụ na faịlụ ahụ dị na nchekwa nke achọrọ ikike dị elu). Iji malite, ị nwere ike ịmalite ịpị "Lenye Iwu" na nchọta na nchịkọta ọrụ, wee pịa nri wee chọta ma họrọ ihe omume menu ihe dị mkpa.
Na iwu ozugbo, tinye iwu:
fsutil sparse setflag "Full_path_to_file" 0
ma pịa Tinye. Ntuziaka: kama itinye aka na faịlụ ahụ na aka, ị nwere ike ịdọrọ ya ozugbo na windo ndenye iwu na oge kwesịrị ekwesị, na ụzọ ga-agbanwe onwe ya.
Naanị, chọpụta ma àgwà "Sparse" na-efu site na iji iwu ahụ
fsutil sparse queryflag "Full_path_to_file"
N'ọtụtụ ọnọdụ, usoro ndị a kọwara zuru ezu iji hụ na njehie ahụ "Mara na faịlụ ahụ dị na NTFS" anaghịzi apụta mgbe ị jikọtara oyiyi a ISO.
Enweghị ike jikọọ faịlụ ISO - ụzọ ndị ọzọ iji dozie nsogbu ahụ
Ọ bụrụ na omume ndị nwere njirimara na-enweghị mmetụta na idozi nsogbu ahụ, ụzọ ndị ọzọ nwere ike ịchọta ihe kpatara ya ma jikọọ oyiyi ISO.
Mbụ, nlele (dị ka ekwuru na ozi njehie) - ma olu ma ọ bụ folda ya na faili a ma ọ bụ faịlụ ISO n'onwe ya. Iji mee nke a, ịnwere ike ịrụ usoro ndị a.
Ka ịlele olu (nkewa disk) na Windows Explorer, pịa aka nri na mpaghara a ma họrọ "Njirimara". Jide n'aka na "mpịakọta mpịakọta a iji chekwaa ohere" anaghị arụnye igbe.
Iji lelee nchekwa na onyinyo - n'otu aka ahụ mepee ihe Njirimara nke nchekwa (ma ọ bụ faịlụ ISO) na mpaghara "Njirimara", pịa "Ndị ọzọ". Jide n'aka na folda ahụ enweghị Ngwá Ọrụ Mmasị.
Na ndabara na Windows 10 maka nchekwa na faịlụ, a na-egosipụta akara ngosi akụ abụọ na-acha anụnụ anụnụ, dịka na nseta ihuenyo dị n'okpuru.
Ọ bụrụ na etinyere akụkụ ma ọ bụ folda ahụ, gbalịa na-edegharị ihe oyiyi gị site n'aka ha gaa ebe ọzọ ma ọ bụ wepụ àgwà kwekọrọ na ọnọdụ dị ugbu a.
Ọ bụrụ na nke a anaghị enyere aka, ebe a bụ ihe ọzọ iji nwaa:
Detuo (adanyela) ihe oyiyi ISO ahụ na desktọọpụ ma gbalịa jikọọ ya n'ebe ahụ - usoro a ga-ewepụ ozi ahụ "Jide n'aka na faịlụ ahụ dị na NTFS".
Dịka ụfọdụ akụkọ si kwuo, nsogbu kpatara KB4019472 melite n'oge okpomọkụ 2017. Ọ bụrụ na ị wụnye ya ugbu a ma nweta njehie, gbalịa ihichapụ mmelite a.
Nke ahụ niile. Ọ bụrụ na enweghi ike idozi nsogbu ahụ, biko kọwaa ihe ndị na-ekwu otú na n'okpuru ọnọdụ ndị ọ na-egosi, ma eleghị anya m nwere ike inyere aka.